« Antsika hisôma an-dakoro »: hilalao sy hifampiserasera ny ankizy | NewsMada
« Antsika hisôma an-dakoro »: hilalao sy hifampiserasera ny ankizy
Hahazo tombony indray ny kilonga madinika sy ny ankizy! Hotanterahina ao amin’ny Ivontoeran’ny kolontsaina malagasy (IKM) Antsahavola, ny 3 ka hatramin’ny 15 septambra izao, ilay hetsika ho azy ireo nampitondraina ny lohateny « Antsika hisôma an-dakoro ». Hiverenan’izy ireo fantarina sy iainana indray ireo nisy fahiny, izay somary hadinodino tato ho ato. Anisan’ireny ny sabaka, ny tsobato, ny fanorona, sns.
Zaza sy ankizy eo anelanelan’ny 7 taona ka hatramin’ny 17 eo ho eo no afaka mandray anjara amin’ny « Antsika hisôma an-dakoro ». Nambaran’ny mpikarakara fa anisan’ny sehatra iray lehibe ahafahan’ny ankizy mifampizara sy milalao ary mifampiserasera izy io. Hilalao sy hanao ody am-bavafo miaraka rahateo izy ireo. Hotanterahina ao anatin’ny firahalahiana sy fifankatiavana avokoa izany.
Tafiditra ao anatin’ny fanamarihana ny faha-5 taon’ny IKM, hiitatra kokoa ny lalao hataon’ny ankizy amin’ity andiany ity. Ny 13 septambra sy ny 14 septambra, tsy hihetsika fa ao anatin’ny trano ny lalao, toy ny sabaka, ny tsobato, ny fanorona, sns. Ny 15 septambra kosa, hifindra eo anoloan’ny IKM ny toerana hilalaovana sy hanatanterahana ireo fanentanana samihafa. Ho hita amin’izany, ohatra, ny fifaninanana izay mahery mihazakazaka amin’ny fanosehana kodiarana, ny fifaninanana taovolo malagasy, ny tsinkonina, ny baolina kitra ho an’olon-telo, sns.
Ao koa ny sehatra ho an’ireo tanora hahafahan’izy ireo maneho ny talentany amin’ny slam, ny jazz, ny fitendrena gitara, sns. Toy ny fanao hatramin’izay, miara-miasa amina fikambanana maro ny IKM amin’ny fanatanterahana ny « Antsia hisôma an-dakoro ».